Soosaarayaasha Dharka ee Soosaarayaasha, Shirkadaha - Shiinaha Shiinaha Warshadaha sneakers dharka
Xilliga guga 2020 kabo cusub oo kabo haween ah oo ku habboon ...
tayada ugu dambeysa ee neefsashada lauglaabi karo ee jilicsan ...
Dayrta Xagaaga ee Ragga cusub ee Kabaha Khadka Tooska ah ee Microfiber ...
Kabaha casriga ah ee raaxada leh ee ragga ugu sarreeya ...
Ragga u labisan dharka sida Kabaha, Ragga ayaa Neefsanaya F ...
Raggii ugu dambeeyay ee buuraha dushooda sare jooga ee jaranjarada ku ciyaaraya ayaa lugeynaya ...
Kabo qaali ah oo kabo isboorti lagu ciyaaro
Iibiyaha sare ee Amazon ragga caadada u ah dharka kabaha sneaker pri ...
Ragga Lace-up-ka ee Ragga Sida Kabaha, Ragga Sneakers moodada jilicsan ee Dumarka Sneakers Sneakers ee Iibka
Waxaad la kulantay ciyaartaada naqshadeeye sida soodejiyeyaasha ah. Dharka iyo xargaha balaastigga ah waxaa ku jira naqshad shaashad ah, saamaynta garaafyada, iyo fudeyd iyo cusbooneysiinta korantada 'EVA'. Dareenka isku-xidhka ee Neefta leh. Cagaha lugta bidix loogu xirto ee maalinta oo dhan xiran. Maqaalka Macluumaadka Waxsoosaarka: 5026 Magaca sheyga: naqshadeeyayaasha caanka ah ee hindhisada caanka ah ee ragga Waxyaabaha sare: dhar dhogor ah, balastar caag ah, walxaha wejiga ka sameysan: qalabka mesh Outsole: fud fudud oo keli ah Nooca: flyknit sock-like kabaha cabirka xajmiga: ava ...
Soosaarayaasha Shiinaha Shirkadaha Ragga Kabaha Casriga ah ee OEM Cas, Sneakers Designer Sneakers, Sneakers Dharka Kabaha Casriga ah ee Guud ahaan Shiinaha
Tababaruhu wuxuu siiyaa casriyeyn casri ah isku-imaatin kasta! Dharbaaxada indhaha ee indhaha soo jiidata waxaa lagu xardhay xargaha maqaarka, waxaana lagu dhejiyay qaab naqshadeeye qaab dhismeed leh. Cagta ciribta Qaabka loo yaqaan 'Lac-up'. Dahaarka dharka. Ceebta lugta lagu gooyay. Phylon khafiif ah. Maqaalka Macluumaadka Waxsoosaarka Number: 5012 Magaca sheyga: Soosaarka Shiinaha wuxuu bixiyaa naqshadeeye sumcad leh iyo hindisooyin dabacsan / tababbaryaal Maaddada sare: suede, dhar mesh, walxo isku-darka walxaha: dharka waxyaabaha gudaha ka sameysan: Waxyaabaha lagu neefsan karo Mesh Outsole ma ...
Xilliga guga 2020 kabo cusub oo kabo haween ah oo isku habboon
Ka soo dhex muuqashada Sneaker-ka oo muujinaya suul wareeg ah, sare oo nin sameeyay, iyo suun midab leh. Dharka dharka lagu xirto ee dharka lagu xirto dharka dhaqashada dharka. Xarkaha dharka jilicsan ee jilicsan iyo cagaha Qulqulaya qulqulka qulqulka, ka samaysan caag waarta. Maqaalka Macluumaadka Waxsoosaarka Number: 5024 Magaca badeecada: tayo sare oo kulul oo iibsi dheddig cusub oo dillaacsan sheyga sare: maqaar suede, mesh texhes, pu pu Waxyaabaha dharka: mesh jilicsan maaddada sheyga: mesh Midsole walxaha: Cushioning EVA Waxyaabaha korantada: walax caag waara Jinsiga: m. ..
Naagaha jilicsan ee haweenka jilicsan ee sneakers haweenka 2020 cusub ee yimid Ragga Dumarka Sneakers Fashion
Kala bax dadka kale ee isku da'da ah laadadkaan cusub. Nylon iyo suede sare ee silhouette midab leh oo isboorti. Xiritaanka leeniska si loo helo aamin aamin ah. Xarig jilicsan iyo carrab. Xirmooyinka mesh ee lagu neefsado Qalabka mashiinka dabacsan ee dabacsan. Maqaalka Macluumaadka Waxsoosaarka Number: 5019 Magaca badeecada: kabaha isboortiga cusub ee casriga ah oo leh qaro weyn oo loogu talagalay dumarka Qalabka sare: suede, meshhable breathable, shey puhl Waxyaabaha lingaxa: sheyga mesh Insole walxaha: mesh Outsole ashyaa: caag cimri dheeri Nooca: lac .. .
Cayaaraha tayo sare leh ee dumarka caanka ah ee dharka cadcad Kabaha Dumarka Casriga ah
U maaree dareenkaaga moodada adiga oo qaab ah qalabka isboorti. Qalabka dharka lagu yaqaan ee Chunky wuxuu leeyahay aalad sare iyo mesh sare. Xiritaanka suunka caadiga ah oo kuxiran suunka dhinaca bidix si cagaha oo dhan meesha loogu hayo inta lagu socdo silsiladda-lugo suuliga. Dahaarka miiqyada xuubka 'Spandex' Lug khafiif ah oo lugo jajaban. Qalabka PHYLON waara ee ay la socoto TPU midsole fur. Lambarka Macluumaadka Waxsoosaarka Number: 5025 Magaca badeecada: moodada dharka lagu xiro ee leh cecil keliya oo loogu talagalay ragga iyo naagta labadaba Maaddada sare: dacwadda tayo sare leh ...
& La soco illaa iyo hadda
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabadayada ama qiimeeyaha, fadlan noo tag oo waxaan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
Cinwaanka:Lambar 618 Chonghong Street, Quanzhou Economic and Technolog Zone Zone, Gobolka Fujian.